Doll Frenki Shteyn kuthandwa kakhulu, it is imakethwa njengoba e imodeli isizinda, kanye playsets. Ekuqaleni amantombazane balijabulela leli uhlamvu original base nomfanekiso waso, nanoma-ke lo unodoli kanye onodoli Torelyay, Abby futhi Cleo de iNayile kwakukhuphuka abaholi yokuthengisa lokhu brand. Kungenxa yalesi sizathu, Abenzi lab 'onodoli, zonke Matel Corporation ezaziwayo, Frankie akhululwa futhi uchungechunge esilandelayo, kodwa ngendlela olusha futhi mnandi - futhi kwabasiza. Yonke imikhiqizo emisha baziswa amantombazane emhlabeni wonke. Doll Frenki Shteyn eyakhishwa ngo uchungechunge kokusa Dance (uchungechunge lunikezelwe amantombazane ehilelekile ukudansa), Pajama party (party super bubuhle begqoke ezokulala), belusizi lolwandle, Coast Skull Halloween (anikezelwe omunye ngamaholide othandekayo kakhulu American). An isethi ezithakazelisayo Frankie futhi ekilasini idale izethameli, lapho efunda le ntombazane isilo. Kulezi chungechunge, doll has a ingubo, izithombe, izesekeli eyengeziwe ezahlukene kanye lyubimigo yayo isilwane - konke kuncike chungechunge. Indalo enhlobonhlobo nokuzivumelanisa kwayo imfashini olufanele labo Amathrendi kungase umona ngisho ezifana fashionista odumile njengoba Barbie onodoli ukuthi kukhona eside kangaka ngokuqinile sahlala Olympus unodoli ukuthi uzihambise kusuka kwakubonakala hhayi ngempela. Kodwa kule minyaka embalwa edlule ukuthandwa Monster onodoli High nabiraeh isikali ngokumangalisayo futhi kungenzeka ukuthi ngesikhathi eduze, Mattel esiyoba yezindawo zokuqala ezimbili Barbie onodoli kanye novelties dolls Monster High.
Yini mayelana Frankie laziwe? She - indodakazi Frankenstein. The High Monster eseneminyaka amasonto amabili kuphela, kodwa ngaleso sikhathi uye waba omunye izinhlamvu APC. Frankie iphathelene kwezemidlalo ukwethembeka, kodwa ke umzimba wayo siqukethe izingcezu ehlukene athungwe ahlanganiswa, Nokho noma yikuphi ukunyakaza sezimiso kuholela enkingeni. Ngesikhathi esifanayo Frankie akuyona ecasukile.
Lokhu Monster unodoli okuphezulu udonsa ulwazi kusuka omagazini intsha, kodwa kunalokho lutho, ngoba bobusha babo. esikoleni Izintandokazi kuncike Heroine - emlandweni.
ifa Heavy kayise akuyona kakhulu abathintekayo ukubukeka ingane. Kuyinto ezikhangayo ngendlela yalo: ende boya obumhlophe nge black streaks. Lezi imicu ngofuzo unina Ort - Umlobokazi Frankenstein. Frankie isikhumba - oluhlaza, futhi amehlo imibala ehlukene, omunye okwesibhakabhaka, kwesibili - oluhlaza. Sentanyeni doll - amabhawudo ezimbili, kagesi conductive, futhi umzimba embozwe yaseZimbabwe.
Phakathi imvelo enobungane Frankie - Drakulaura, Claudine, Cleo de Nile, Jackson Jekyll. I Monster High lentombazane kungekho izitha, yena uzwelana zonke abafundi. Ngo yokudla wakhe imikhuba, yena ongakabi isinqumo, kodwa sonke lesi sikhathi ukuzama izinsuku eziyishumi nanhlanu zokuphila kwakhe, Frankie ithandiwe. Frankie uyazi ukuthi yini yena letingabhukusha, kungenjalo it jikisa nga inqwaba zidwedwe, kodwa akazisolanga. Ubuqotho okwenzekayo - isici esiyinhloko umlingisi Frenki Shteyn.
Girl Monster kuletha isidalwa Vatzit okuyinto eqoqwe uyise ka zomzimba zezilwane ezahlukene.
Monster High Doll Frenki Shteyn ongakabi abakhethiwe isoka unomphela, kodwa ucabangela candidacy Deuce Gorgon, Holt Hyde futhi Jekyll Jackson.
Sibutsetelo somshini wokushefa we-Gillette Fusion ProGlide Power